Mpempe ọkụ na-agbanwe mmiri, mgbidi mgba ọkụ, mgbidi mgba ọkụ - Ohom
Yueqing OHOM Electric Co., Ltd. isi ikike ikike mgbochi anaghị agagharị & soket, sọlfọ ala, mgba ọkụ & pọọdụ, mpịakọta igwe anaghị agbapụta mmiri na sistemụ ọkwa tile. Anyị wetara ngwaahịa mgbochi mmiri a pụrụ ịdabere na ya nke siri ike maka ụlọ na nke mba ọzọ.
a na-ebugharị ngwaahịa anyị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Mba ndị dị ka Europe na United States. Ugbu a, anyị abụrụla OEM na ODM na-akwado ndị nrụpụta ihe ọnụ ụlọ ọrụ nke ndị nrụpụta ụlọ na nke ndị mba ọzọ maara nke ọma.Ọ bụ nke a na-eji arụ ọrụ ebe obibi, ebe a na-ewu azụmahịa na ebe nrụpụta maka njikwa ọkụ.
Sistemụ Ihe Nleta
Ntinye mgbochi mmiri IP66 na ebe anya
IP66 Igwe anaghị egbochi mmiri na Soket
IP55 Mpempe Akwụkwọ Mgbapụta na Soket
Mmiri Gosiri Ihe Mgbanwe & Socket
IP66 usoro nke ihe mkpuchi mmiri na-etinye n’elu mgbidi & soket nwere ụdị 4 nke igbe igbe mmiri IP66 na-anabata ịnabata ngwa ọrụ 6 dị, gụnyere soket-Multi, BS soket, Schuko so…
1. Ihe a na-acha cha cha bụ ihe anaghị egbochi mmiri n'akụkụ ọ bụla. 2. Nchaji ikpo okwu ga-awunye ngwaọrụ nchebe ịsa mmiri, onc…